Qaramada Midowbay oo dadka Soomaaliyeed ku amaantay hal adaygooda musiibadii 14-kii October – The Voice of Northeastern Kenya
Qaramada Midowbay oo dadka Soomaaliyeed ku amaantay hal adaygooda musiibadii 14-kii October
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya, Nicholas Haysom, ayaa sheegay inay garab taaganyihiin dhibbanayaasha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee sannad ka hor maanta oo kale 14-kii October ka dhacay bartamada magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya.
Waxa uu hadalkaan ka sheegay mar uu maanta ka hadlay xaflad koobnayd oo lagu qabtay xarunta Qaramada Midoobay ee caasimadda Muqdisho.
Qaraxa waxaa ku dhintay ugu yaraan 587 qof, wuxuuna ahaa weerarkii argagaxiso ee ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca qaarada Afrika Dad kale oo fara badan ayaa ku dhaawacmay qaraxaas, waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaa xubin ka mid ah shaqaalaha Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay,oo lagu magacaabi jiray Faiza Sheekh Maxamuud.
Ergayga Jimciyada Qaruumaha ka dhexaysa u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay maalintan ku xasuusanayaan dadkii geeriyooday, wuxuuna ugu baaqay kooxaha xagjirka ah inay ka haraan ama ay joojiyaan inay walxaha qarxa hub ahaan ugu adeegsadaan dagaalka.
Nicholas Haysom wuxuu xusay in Weerarrada qaraxyada oo aan loo meeldayin awgood, dhibbanayaashu inta badan ay noqdaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwasoo isugu jira rag, haween iyo carruur, aysana jirin wax ujeeddo siyaasadeed ah oo weligeed lagu gaari karo dil aan loo meeldayin oo loo geysto dad rayid ah.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midowbay wuxuu sidoo kale ku amaanay hal adaygii ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaadadu ku dhacday, kuwaasoo garowsaday inay noloshoodu sii socoto aana marnaba istaajin horumarka uu dalku ku tallaabsanayo si uu u gaaro nabad iyo barwaaqo inkastoo ay jiraan dhacdooyin argagaxiso saamayn yeesha,wuxuuna u rajeynay hormar iyo wanaag dhinacyo badan leh.
← DHAGEYSO Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Marko